Namoron-kira ho ana mpanakanto maro: nodimandry, omaly, i Donat Rasamimanana | NewsMada
Namoron-kira ho ana mpanakanto maro: nodimandry, omaly, i Donat Rasamimanana
Maizina indray ny tontolon’ny mozika… Fantatra fa nodimandry, omaly, i Donat Rasamimanana. Niasa tao ambadiky ny mpanakanto maro, nanamboatra ny lazan’izy ireo izy…
“Ilay mpanamboatra ny lazan’ireo mpanakanto”, hoy ny filazan’ny mpanao gazety an’i Donat Rasamimanana. Tena izany tokoa anefa izy… Nanam-bintana ireo mpanakanto maro niara-niasa taminy, satria fantatra fa nodimandry omaly, teo amin’ny faha-54 taony i Donat Rasamimanana. Tsy nifoha intsony tao anatin’ny torimasony izy, raha ny fanazavana nomen’ny fianakaviana.
Fandre sy fahita matetika amina rakitsary na rakikira ny anaran’i Donat Rasamimanana. Ireo tena nilomano ao anatin’ny tontolon’ny mozika kosa no nahafantatra azy tsara. Mpamoron-kira nikoizan’ny maro izy. Izy no nanome hira an-dry Poopy, Tovo J’Hay, Nanie, Imagine, Lôla, Syl Fleurys, Titi, Paris, Hillarie, Farakely, Aina Cook, sns. Angamba tsy ampahafolon’ireo mpanakanto nomeny hira akory ireo voatonona ireo… Eny, tao ambadiky ny lazan’ny mpanakanto maro i Donat Rasamimanana. Ireo mivantambatam-pitenenena aza dia nahasahy nilaza fa “mila mandalo amin’i Donat izay te halaza”.
Tsy tongatonga ho azy izany, fa nanana ny fijeriny ny zavakanto nampiavaka azy i Donat. “Arakaraka ilay mpanakanto tonga eto, ny tanjony, ny fihetsiny, ny feony, ny tiany hahatongavana eo amin’ny sehatry ny mozika ny hira homeko azy. Misy ireo tonga dia te hividy hira toa ny mividy anana etsy am-pita etsy. Misy kosa vao miresaka na vao mihira dia tsapanao fa hisongadina ka mila hampiana sy tohanana…”, ampahany tamin’ny resadresaka nifanaovana taminy tao amin’ny toeram-ponenany sady fandraisam-peo teny Ambohidahy, ny 10 taona lasa io.
Manampy izay maha mpamoron-kira nikoizana azy izay, mpitendry gitara sy zavamaneno hafa koa, no sady mpandrindra hira i Donat Rasamimanana. “Maro ny hiram-pitiavana nataoko, fa mahafinaritra ahy foana koa ny hira fiderana. Namolavola nandritra ny taona maro koa ny fitendrena tao am-piangonana”, hoy izy, nandritra io resadresaka io. Eny, homem-boninahitra ao amin’ny Ekar Notre Dame de Fatima Ambohimirary, fiangonana nahafantarana ary nizaran’i Donat ny fahaizany sy ny traikefany ny nofo mangatsiakany, ny zoma ho avy izao, mialoha ny hanaterana azy eny amin’ny fasany eny Ambohimangakely.